mercredi, 24 juillet 2019 19:24
Rugby - Lalaon’ny Nosy: Tsara fanombohana ny Makis
Nomontsanin’ny Makis tamin’ny isa 33-00 i Maorisy tamin’ny lalao rugby lalaovin’olona fito, tamin’ny lalao voalohany natrehiny androany. Resin’i Makis 21 noho 15 indray i La Réunion tamin’ny lalao faharoa androany. Nomontsanin’ny Makis tamin’ny isa 40 no 7 ihany koa i Mayotte tamin’ny lalao fahatelo sady farany natao tamin’ity tolakandron'ny alarobia 24 jolay ity.
Atletisma - Lalaon’ny Nosy: Nitondra Medaly volamena 3 ho an’i Madagasikara
Voalohany ary nahazo medaly volamena ny Atleta Malagasy teo amin’ny hazakazaka 100m misy fefy sokajy vehivavy. Nahazo volamena roa ihany koa ny Malagasy teo amin'ny hazakazaka 400m tsotra. Samy voalohany ny Atleta Malagasy teo amin’ny sokajy lehilahy sy sokajy vehivavy.
mercredi, 24 juillet 2019 19:04
Kitra - CAN 2019: Nampidi-bola 83 tapitrisa dolara tamin’ny CAF
83 tapitrisa dolara ny vola niditra tamin’ny kaonfederasiona afrikanina amin’ny baolina kitra na CAF tarihin’ny filohany, Ahmad Ahmad, nandritra iny fiadiana ny Amboaran’i Afrika andiany faha-32 na CAN andiany faha-32 natao tany Egypta iny. Nisy fitomboana io satria 67 tapitrisa dolara ny vola niditra tamin’ny CAF nandritra ny CAN 2017 tany Gabon, ary 49 tapitrisa dolara no niditra tamin’ny CAN 2015 tany Guinée Equatoriale. Nitombo ho 25 tapitrisa dolara ny tontalin’ny vola fankasitrahana tsinjarain’ny CAF tamin’ireo klioba niisa 24 nifaninana nandritra iny CAN 2019 iny.
mercredi, 24 juillet 2019 09:34
Kitra – Federasiona: Ho fantatra amin’ny 2 Aogositra ny lisitra ofisialin’ireo kandida filoha
Namoaka lisitra vonjimaika an’ireo kandida nahafeno fepetra sy nahatonga ara-potoana ny dosie firotsahan-kofidiany ho filohan’ny Federasiona malagasy amin’ny baolina kitra ny Comité de Normalisation FMF omaly 23 jolay. Enina no nametraka ny dosie, dimy no nahafeno fepetra. Sady efa tara vao nametraka antotan-taratasy, no tsy nahazo ny « cautions 3 », na filohan’ny ligim-paritra telo farafahakeliny takiana hiantoka ny firotsahan-kofidiany, i Jean Noël Abel ka tsy voatazona. Manana hatramin’ny 26 jolay 2019 farafahatarany amin'ny 5ora hariva i Jean Noël Abel hanao fampakarana ny fanapahan-kevitry ny Comité de Normalisation raha toa ka tsy afa-po. Doda Andriamiasasoa, Mohamed Abdillah, Arizaka Raoul Rabekoto, Hery Rasoamaromaka, ary Neypatraiky Rakotomamonjy no voatazona ny firotsahan-kofidiany.
Niala an-tanindrazana androany niazo an’i Afrika Atsimo i Andriamirado Arohasina na Dax. Irakiraka mpisolotoerana tao amin’ny Barea niatrika ny CAN tany Egypta izy. 28 taona, mila ravinahitra atsy Afrika Atsimo, irakiraka ao amin’ny klioban’ny Kaizer Chiefs. Nanolotra vola iray tapitrisa Ariary ho an’ny Barea CHAN i Dax, ny Barea CHAN izay hiatrika lalao iraisam-pirenena etsy Mahamasina amin’ny alahady ho avy izao. (Jereo Sary Tohiny)
Na amin’ny sehatra Afrikanina na aty amin’ny ranomasimbe indianina dia anjakan’ny Malagasy ny taranja fibatana fonjamby, indrindra amin’ireo sojaky latsaky ny 60kg lahy sy vavy. Nandrombaka medaly volamena isika tany Kenya, tamin’ny fiadiana ny tompodakan’i Afrika, medaly volamena maromaro ihany koa no azon’ny mpibata fonjamby malagasy amin’ny Lalaon’ny nosy andiany faha-X tanterahina atsy amin’ny Nosy Maorisy amin’izao fotoana izao. Manohana manokana ireo Atleta any Maorisy ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto, ary izy no nanolotra ny medaly ho an'ny Malagasy nibata ny amboara. (Jereo Sary Tohiny)
Hihaona amin'ny Barea an’i Madagasikara eo Mahamasina ny Mambas Mozambikana amin’ny alahady 28 jolay 2019. Tafiditra amin'ny lalao mandroson'ny fihodinana faharoan'ny fifanintsanana CHAN 2020 ity lalao ity. Maitre Franklin no mpanazatran’ny Barea CHAN, Victor Matine kosa ankehitriny no mpanazatra ny ekipan'i Mozambika rehefa nametra-pialana i Abel Xavier. Ny CHAN dia lalao aty Afrika hifaninanan'ny ekipam-pirenena, izay ireo mpilalao anaty kilioba ao amin'ilay firenena sy tsy mila ravinahitra any ivelany ihany no mandray anjara. Atao isaky ny roa taona izy io. (Jereo Sary Tohiny)
Miankina amin’ny vokatry ny an-tsapaka hatao anio alina ao amin’ny Intercontinental, ao Balaclava no hahafantarana na i Madagasika na Seisela no hanampy an’i Maorisy ao amin’ny Vondrona A, hiakatra amin’ny manasa-dalana amin’ny baolina kitra. Araka ny andininy faha-8, andalana voalohany, teboka faha 3 amin’ny lalàna mifehy ny fifaninanana amin’ny taranja baolina kitra, dia antsapaka no amantarana izay hanohy ny lalao, raha toa ka mitovy ny isa azon’ny ekipa, mitovy ny elanelan’ny baolina maty sy tafiditra na « Goal average » sy ny isan’ny baolina maty. Samy manana isa 2, rehefa samy nanao ady sahala 2 avy, taorian’ny lalao 2 vitany avy i Madagasika sy Seychelles. Samy nahatafiditra baolina 1 avy ; ary samy 0 ny « Goal average ».
lundi, 22 juillet 2019 09:55
Volley – Lalaon’ny Nosy: Fandresena ho an’ny lehilahy, mila ezaka ny vehivavy
Andro voalohany ho an’ny mpilalao voley omaly alahady amin’ny Lalaon’ny Nosy. Nandresy an’i Maldives tamin’ny seta 3 noho 0 i Madagasikara teo amin’ny sokajy zazalahy. Niondrika tamin’ny seta 1 noho 3 nanoloana an-dry zareo Maorisianina mpampiantrano kosa ny Malagasy teo amin’ny sokajy zazavavy. Tao amin’ny kianja mitafon’i Pandi Sahadeo ao Vacoas no natao ny lalao. Tonga nanohana ny ekipa malagasy tamin’izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mivady sy ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto.
lundi, 22 juillet 2019 09:40
Kitra – CAN 2019: Ireo tarehimarika tsara ho fantatra
Nivalona tanteraka ny ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra andiany faha-32 na Total CAN 2019, natao tao Egypta ny 21 jona ka hatramin’ny 19 jolay 2019. Sambany tamin’iny CAN iny no 24 ny isan’ireo ekipam-pirenena nandray anjara. 52 ny isan’ny lalao vita, ka ny 39 nisy mpandresy, raha nirava ady sahala ny lalao ambiny niisa 13. 102 ny isan’ny baolina maty nandritra ny CAN, ary io no be indrindra tao anatin’izay andiany 32 vita izay. Niisa 171 ny karatra mavo nozarain’ny mpitsara, ary 5 ny karatra mena. I Alzeria no nandrombaka ny Amboara tamin’ity CAN 2019, fanindroany no nahazoany an’io anaram-boninahitra io taorian’ny taona 1990.